Qurxinta → Xirashada kombiyuutarka / qurxinta xayeysiinta iyo dharka shaqada
Waxaa jira habab badan oo qurxinta, farsamooyinka cusub ayaa jahwareer ku ridi kara dad badan markii ay la soo gudboonaadaan xulashadooda. Go'aanka ku saabsan nooca calaamadeynta waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Go'aaminta ujeedada dharka ama dharka daabacaadda ayaa naga caawin kara inaan doorano farsamo gaar ah. Iyadoo aan loo eegin nooca calaamadeynta ee aad dooratay, tolidda xargaha ayaa weli ah habka ugu sharafta badan.
Habka ugu da'da weyn ee qurxinta
Guntin Lagu yaqaan kumanaan sano mahadsanidiisa qaabkeeda guud, wali wey khuseysaa markasta. Natiijo ahaan, dharka la isku qurxiyo ayaa u muuqda mid aad u qurux badan oo dammaanad qaadaya nolol aad uga dheer tan dharka lagu qurxiyo farsamooyinka kale.
Koofiyad leh sawir gacmeed lagu sameeyay daabacaadda kombiyuutarka
Qurxinta munaasabad kasta
Kuweena saxiixa wuxuu la macaamilaa sameynta waara oo wax ku ool ah qurxinta shaqada iyo dharka xayeysiinta, iyo waliba hudheellada iyo dharka cuntada. Waxaan leenahay baarkinka mashiinka noo gaar ah, kaasoo noo saamaxaya inaan damaanad qaadno qiimaha tartamada iyo waqtiyada dirista oo gaagaaban.
Waxaan sameynaa dadaal kasta oo aan ku dhameystireyno amar kasta. Kooxdayadu way ku farxi doonaan inay kaa caawiyaan xulashada alaabada iyo sidoo kale habka qurxinta. Waxaan sidoo kale bixinaa adeeg xirxira dharka.
dil daabacaadda kumbuyuutarka waxay u baahan tahay iibsashada barnaamijka daabacaadda. Habkani waxaa lagula talinayaa cabirrada sawirada yar yar. Marka barnaamijka daabacaadda la iibsado, waxay ku sii jirtaa keydkeena macluumaadka si wanaagsan, markaa markaad nagu soo noqotid amar kale, wax lacag ah lagagama qaadi doono diyaarinta isla barnaamijka mar labaad. Waa qaab qurxoon oo aan waqti lahayn oo qurxin ah.
Waa wax dhab ah oo loogu talagalay kuwa ugu adkeysiga u geliya meesha ugu horeysa. Featured lahaa xitaa sannado ka dib waxay umuuqataa mid layaableh. Tani waxay qancin doontaa kuwa daneeya sawirka shirkadooda. Daabacaadda noocan ah waxaa sidoo kale lagula talinayaa dharka sida joogtada ah loo maydho ee u nugul walxaha dhaqidda adag.
Habka loo adeegsado daabacaadda kumbuyuutarka
Daabacaadda shaashadda waa farsamo qurxin taas oo qaabka daabacaadda ay tahay shaashad lagu mesh mesh cufan. Mesh-ka waxaa laga samayn karaa bir ama fiber fiber. Nuqul sameynta ayaa ka kooban duubista rinjiga ilaa dhinta. Sameynta daabacaadda shaashadda waxay ku lug leedahay iibsashada jaantus loogu talagalay daabacaadda.
Tani waa xalka ugu fiican markaad rabto inaad hesho saameynta midabada casiir leh iyadoo la ilaalinayo saxnaanta iyo iska caabinta xoqidda. Mashruuca la dhammaystiray wuxuu u ekaan doonaa mid adag toddobaadyo ama xitaa bilo.
Mashruuc kasta waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha shaqsiyeed. Waqti kasta oo aan u hagaajinno sheyga xagga maaddada iyo naxwaha iyo sidoo kale meesha garaafyada ay kula heshiiyeen macmiilka. Mararka qaarkood, waxaan wax ka beddelnaa naqshadda iyadoo la raalli ka yahay macmiilka si aan u helno saamaynta ugu wanaagsan.
Daabacaadda shaashadda waxaa lagu samayn karaa oo keliya dharka, laakiin sidoo kale qalabka la xushay
Daabacaad toos ah DTG
Daabacaadda DTG ama "Tooska To Dharka" waa hab casri ah oo si toos ah loogu qurxiyo dharka iyo dharka. Farsamada 'DTG' waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dalbatid wax sawiro ah dharka cudbiga ama cudbiga oo leh shaybaarka elastane / viscose. Sawirada waxaa lagu abuuray daabacaad gaar ah. Daabacaadda iyadoo la adeegsanayo farsamada 'DTG' waxay awood u siineysaa soo saarista midabada saxda ah ee midabada iyo kala-guurka midabka Daabacaadda ayaa suurtagal ah iyada oo aan loo baahnayn in la diyaariyo naqshad kaliya hal gabal.
U adkaysiga daabacaadda DTG waxay kuxirantahay dhowr waxyaalood. Ugu horreyntii, qaabka iyo xuduudaha qalabka - qalabka cusub, ayaa ka sii fiicnaanaya tayada iyo waxqabadka. Cunsurka kale ee saameynaya adkeysiga waa noocyada rinjiga la isticmaalay, dharka lagu daabacay daabacaadda iyo xirfadaha shaqaalaha.
Daabacaadda DTG, iyada oo ay ugu wacan tahay hal-abuurkeeda, waxaa loo isticmaali karaa labadaba wax soo saar ballaaran iyo wax soo saar hal xabbo ah. Tani waxay awood u siineysaa daabacaadda tijaabada kahor intaadan bilaabin taxanaha oo dhan. Sidoo kale waa ikhtiyaar aad ufiican dhalashada dhalashada, aroosyada ama hadiyadaha sanadguurada. Shirkadaha, sidoo kale waa xal ku habboon haddii aan dooneyno shaqaale kasta inuu dharkiisa ku qoro magacooda ama cinwaankiisa shaqo. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa dharka, tusaale ahaan dharka naadiyada isboortiga, halkaas oo lambarro kala duwan lagu daabacay shaatiyada ama gaagaaban.
Daabacad cusub Walaal DTXpro Bulk, oo aan ku balaarinay baarkinka mashiinka, waa qaab jilicsan oo aad u kala duwan. Waad ku mahadsan tahay, waxaad ku ballaarin kartaa bakhaarkaaga alaabooyin gaar ah sida Funaanado qof kasta oo magaciisa leh, cinwaan shaqo, bacaha xayeysiintaiyo xitaa kabo ay ku xiran tahay farshaxankaaga miisaanka mass sidoo kale taxane kooban.
Badanaa waxaan isweydiinaa hadiyad gaar ah ee loogu talagalay dadka jecel munaasabadda Christmas, Easter, Maalinta Hooyada ama dhalashada. Waxaan dooneynaa hadiyadeena inay istaagto oo aan sii joogno waqti dheer
si ay u dhacdo, waxaa habboon in laga fikiro hadiyad shaqsiyeed, inta badan kuwa wax ku oolka ahi ma aha oo kaliya inay kiciyaan xusuus wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay u adeegaan muddo dheer.
Daabacaadda DTG uma baahna diyaarin mashruuc taas oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ugu waaweyn (sida ay tahay xaalka daabacaadda shaashadda ama daabacaadda kombiyuutarka). Waa suurtagal in lagu daabaco sawirada ama qoraallada hal xabbo oo keliya, sidoo kale daabacaadda sawirku waa mid dhab ah oo si gaar ah caan ugu ah hadiyadaha, laakiin waxaa muhiim ah in sawirka uu ku jiro xalka ugu sarreeya. Daabacaadda 'DTG' waxaa si xamaasad leh u doorta hay'adaha xayeysiinta maxaa yeelay waxaa lagu gartaa qiimo jaban iyo adkeysi, taas oo si gaar ah muhiim u ah marka la abaabulayo dharka ama dharka munaasabadaha kala duwan ama abaalmarinno loogu talagalay tartamada.
waxaan kugu martiqaadeynaa Earlfal adeeggayaga dukaanyaa ku farxi doona inuu ka jawaabo su'aalahaaga oo uu sameeyo qiimeyn calaamadeyn bilaash ah.
dhididka leh astaanta Allegrodhididka magaca lehdaabacaadda kumbuyuutarkaCalaamadaha funaanadahafunaanado calaamadeysandhar astaan ​​lehdhar daabacandhogorta leh astaantadaabacaadda shaashaddaqurxinta dharkaqurxinta dharka esrorocalaamadeynta dharkacalaamadeynta dharka